Fantaro ny Vokatra lehibe
Hualongyicheng dia manome anao izay rehetra ilainao amin'ny fomba famokarana azo antoka sy mahomby.
Ho an'ny Pipe famatsian-drano PVC
Ho an'ny Fittings PVC
Stabilizer ho an'ny vokatra mazava mazava PVC
Polyethylene klorinina (CPE)
Fanampiana amin'ny fanodinana jeneraly PVC
Izahay no safidy tsara indrindra ho anao
Ao amin'ny Hualongyicheng New Material Technology, ny olontsika dia entin'ny Additives avo lenta, Serivisy ho an'ny mpanjifa Premium, fanavaozana ary fahatokisana. Tsy ny mpanjifa fotsiny no mividy ny vokatray; izahay koa te-hanampy azy ireo hahazo ny sarany indrindra amin'ny vokatra.
Ny foiben-toerany any Guangdong, Sina, Hualongyicheng dia manana mpiasa maherin'ny 100 manerantany ary ivon-toeram-pamokarana sy R&D, izay mirefy 10.000 metatra toradroa. Ny aditifanay rehetra dia mifanaraka amin'ny fenitra SGS sy EN71 ary nahazo fankatoavana tamin'ny fenitra iraisam-pirenena momba ny tontolo iainana ISO14001: 2004.
Ny ivon-toerana fanompoana aorianay dia any Vietnam, Myanmar, Thailand, Malaysia, Nigeria, sns.
izahay dia hahazo antoka fa hahazo foana ny
Ny fanehoan-kevitra tsara avy amin'ny mpanjifantsika dia iray amin'ireo hery manosika anay.
Ny fiofanana ara-teknika tsy tapaka ho an'ny mpiasa dia miantoka ny kalitaon'ny vokatra tsara indrindra.
Ny traikefa amin'ny famokarana vokatra avy amin'ny vokatra samihafa amin'ny PVC dia mitazona antsika mialoha ny fihodinana.
Ny additives PVC anay dia naondrana tany Eropa, Afrika, Azia atsimo atsinanana, Moyen Orient, Amerika Avaratra, Amerika atsimo sns.
Mazava ny tariby PVC
INONA Milaza ny olona
Xu Weizhao Filoham-pirenena ao amin'ny Rifeng Enterprise Group
Hualongyicheng dia mpiara-miasa matihanina. Ny vokatra sy ny serivisin'izy ireo dia nanampy anay hamokatra vokatra PVC tsara kalitao ary namaha ny olana maro mifandraika amin'ny famokarana. Misaotra anao.
Zhu Liquan Filoha lefitra ao amin'ny Weixing Group
Izy io dia mpamatsy fantsona fantsom-bokatra PVC nosafidintsika an-jatony. Nahavita asa tsara izy ireo hatramin'ny andro voalohany.
Ding Langyu Tale jeneraly ao amin'ny Zhongcai Pipe
Ny serivisy omen'i Hualongyicheng antsika dia avo lenta indrindra. Mendri-pitokisana izy ireo, azo itokisana ary mamorona. Tsy hisalasala miasa miaraka amin'izy ireo aho amin'ny tetik'asa ho avy.
Hatramin'ny nananganana azy, ny orinasanay dia namolavola vokatra kilasy voalohany manaraka ny fitsipiky ny kalitao aloha. Ny vokatray dia nahazo laza tsara eo amin'ny sehatry ny indostria sy ny valuabletrusty eo amin'ireo mpanjifa vaovao sy taloha ...
avy amin'ny adminJun-19-2020
avy amin'ny adminMay-11-2020
Ny HLYC dia manasongadina ny fifantohany maharitra amin'ny taona 2020
avy amin'ny adminMar-11-2020
HLYC dia nanambara ny fivoarana mahomby amin'ny Compound Formula mazava ao amin'ny PVC